​Al shabaab oo madax-furasho dul dhigtay Shaqaale u af-duuban - Worldnews.com
​Al shabaab oo madax-furasho dul dhigtay Shaqaale u af-duuban
BAYDHABO, Somalia - Al shabaab ayaa dalbatay lacag madax-fursho ah, sii deynta Shaqaale u shaqeeya Hay’ad Samafal oo shalay ku qafaasheen duleedka magaalada Baydhabo, ee xarunta gobolka Baay.
War kasoo baxay Al shabaab ayaa lagu sheegay inay doonayaan $200,000 (Labo Boqol oo Kun oo Doolar), oo ay kusii deynayaan
​Madax-furasho lagusii daayay shaqaale lagu af-duubtay Baay
BAYDHABO, Somalia - Kooxda Al shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay lacag madax-furasho ah kusii daysay shaqaale hay'ad samafal, oo ay ku afduubteen 16-ka bishan July...
Gareowe Online 2017-07-24
Weerar ay askar ku dhimatay oo ka dhacay Balcad
Ugu yaraan labo askari ay ku dhimatay mid kalena waa uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay meel u dhaw tuulada Gololey oo qiyaastii 7 KM woqooyi uga beegan degmada Balcad ee...
​Somalia: Qarax ka dhacay gobolka Baay
BUURHAKABO, Somalia - Qarax xooggan ayaa kolonyo ay la socdeen ciidamada Eithiopia ee qeybta ka ah AMISOM waxaa lagu eegtay inta u dhaxayso Buurhakabo iyo Baydhobo, oo...
Gareowe Online 2017-03-04
Sarkaal ciidan iyo Askar lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Baay
BUURHAKABO, Soomaaliya - Kooxda Al Shabaab ayaa sheegtay inay dishay Taliyihii ciidamada militariga degmada Buurhakabo Korneel Cabdiraxmaan Cismaan Abroone iyo saddex...
Gareowe Online 2018-01-29
GEDO: Shaqaale Gar-gaar oo lagu afduubay Luuq
KISMAAYO, Jubbaland- Shaqaale Gar-gaarka ka shaqaynayay gaar ahaan Tallaalka ayaa lagu afduubtay degmada Luuq ee gobolka Gedo, sida uu GO u xaqiijiyeen booliiska degmadaas....
BALADWEYNE, Hiiraan- Ururka Al Shabaab ayaa sii daayay qaar kamid ah Shaqaale Caafimaad oo todobaadkii hore dabayaaqadiisa ay ku afduubteen nawaaxiga magaalada Baladweyne...
Gareowe Online 2017-04-07
BALADWEYNE, Hiiraan- Ururka Al Shabaab ayaa sii daayay qaar kamid ah Shaqaale Caafimaad oo todobaadkii hore dabayaaqadiisa ay ku afduubteen nawaaxiga magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Shaqaalahan oo ka koobnaa, Darawal, Labo Arday kalkaaliyaal ah iyo Dakhtar ayaa wararku sheegayaan in saddex kamid ah la siiyay. Shabaab ayaa la haray dhakhtarka oo ahaa mid ku...
Somalia: Shaqaale Caafimaad oo lagu afduubtay gobolka Hiiraan
BALADWEYNE, Hiiraan- Shaqaale adeegyo caafimaad oo xoolaha la xariira ka samaynayay gobolka Hiiraan ee maamulka HirShabeelle ayaa lagusoo waramayaa in maanta la afduubtay. Shaqaalaha ayaa waxaa kaxaystay koox aan la aqoon haybtooda. Qafaalashada ayaa ka dhacday meel qiyaastii 10KM u jirta magaalada Baladweyne oo lagu magacaabo Coola-cad. Dadka la kaxaystay ayaa la sheegay inay...
Weerar culus oo ka dhacay gobolka Baay iyo Wararkii ugu dambeeyay
BAYDHABO, Soomaaliya - Weerar culus oo sababay khasaaro isagu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo, ee xarunta gobolka Baay. Saraakiisha amniga gobolka Baay ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay saaka wadada xiriirisa Baydhabo iyo Deynuunay kaidb markii dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay jidka u galeen Kolonyo Ciidan oo kusii jeeday deegaanka...
​Somalia: Al Shabaab oo Dagaal kula wareegay Goofgaduud
GOOFGADUUD, Somalia- Dagaalyahanno katirsan Kooxda Al Shabaab ayaa saaka Dagaal khasaaro geestay kula wareegay deegaanka Goofgaduud, oo 35KM dhanka Waqooyi ka xiga magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay. Al Shabaab ayaa sheegtay inay qabsadeen Goofgaduud, kadib weerar culus oo xalay Saqdii dhexe ku qaadeen saldhigyada ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen...
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Baay ee Koofur Galbeed Somaliya, ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay duleedka Magaalada Baydhabo. Dagaalka oo udhexeeya Ciidanka Koofur Galbeed iyo kuwa Shabaab ayaa ka dnabeeyay kadib markii dagaalyahano katirsan Shabaab ay Weerareen Ciidamo katirsan Kuwa Koofur Galbeed. Dagaalka oo xooganaa ayaa waxaa ka dhashay Khasaare isugu jira...